China STE Beijing Stelle လေဆာ4လက်ကိုင်စက် ကြီးကြီးမားမား အစက်အပြောက် diode တက်တူး Nd Yag IPL RF ALL in 1 ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Stelle
STE Beijing Stelle လေဆာ4လက်ကိုင်စက် အကြီးစား အစက်အပြောက် diode တက်တူး Nd Yag IPL RF ALL in 1
ကြီးမားသော ပါဝါမြင့် Diode လေဆာ + nd yag လေဆာ + E-light + RF4in 1 ဘက်စုံသုံး လေဆာစက်။
စက်တစ်လုံးတွင် လုပ်ဆောင်ချက် 10 လုံးပါရှိသည်။
လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း ဝက်ခြံကုသခြင်း ဓာတ်ပုံပြန်လည်နုပျိုခြင်း အရေပြားဖြူစင်ခြင်း Spider vein treatment Pigmentation treatment Tattoo removal Carbon peeling Wrinkle removal Body lifting
အလွန်အဆင့်မြင့်သောနည်းပညာ။အခြားကုမ္ပဏီသည် IPL+ အခြားလက်ကိုင်စက်များကိုသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် DIODE + အခြားလက်ကိုင်စက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လက်ကိုင်နံပါတ်-လက်ကိုင် ၄ ခု
ကိုင်တွယ် 1-ဆံပင်ဖယ်ရှားရန်အတွက် ပါဝါကြီးသော Diode လေဆာလက်ကိုင်
လက်ကိုင် 2-ဝက်ခြံကုသခြင်း၊ ဓာတ်ပုံပြန်လည်နုပျိုခြင်းစသည်တို့အတွက် E-light လက်ကိုင်
လက်ကိုင် 3-တက်တူးဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ကာဗွန်တက်တူးအတွက် ND Yag လေဆာလက်ကိုင်
လက်ကိုင် 4-မျက်နှာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် RF လက်ကိုင်
အာမခံချက်-အာမခံ2နှစ်၊ သက်တမ်းအခမဲ့ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု
အဆင့်မြင့်ဆုံး4in 1 လေဆာ။
သတ်မှတ်ချက် Diodeလေဆာ IPL/SSR/SHR/E-light Nd:Yag လေဆာ RF
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 2000W 2000W 500W /
လေဆာပါဝါ 800W / 15W /
စွမ်းအင်/အမြင့်ဆုံး 1-166J/cm2 1-50J/cm2 1000mJ 1-100W
လှိုင်းအလျား 808nm သို့မဟုတ် Triple Wave 480/530/590/640/690-1200nm 532/1064/1320nm /
အစက်အပြောက်အရွယ်အစား 15*30mm+15*10mm 15*50mm(12*30mm စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်) 6mm 20/28/35mm
Pulse ကြာချိန် 10-400ms 1-12ms 10ns-20ns /
သွေးခုန်နှုန်းကြားကာလ / / / 0-3000ms
* E-light အတွက် 2000W ပါဝါထောက်ပံ့မှု (IPLSHR E-light) စနစ်
* 100W ပါဝါထောက်ပံ့မှုRFစနစ်။
* ယူကေမီးအိမ်၊ အမေရိကန်လေဆာဘားများ
Diodeလေဆာလက်ကိုင်- ရိုက်ချက် သန်း 20၊ US ပေါင်းစပ်လေဆာအရင်းအမြစ်
2 in 1 နေရာအရွယ်အစား
* အကွက်ကြီး 15x30mm။နောက်ကျောဆံပင်ကဲ့သို့ ဧရိယာကြီးကြီးမားမားကုသမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ဒီလို အရွယ်အစားကြီးကြီးနဲ့
အလွန်ထိရောက်ပြီး pass up နှင့် down ရာတွင် အချိန်များစွာ သက်သာစေပါသည်။
* သေးငယ်သောအစက်: 15 * 10 မီလီမီတာ။နှုတ်ခမ်းဆံပင် သို့မဟုတ် ဆံပင်ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ သေးငယ်သော ဧရိယာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး လှပသော မုတ်ဆိတ်မွေးစည်း သို့မဟုတ် မျက်ခုံးမွေးပုံစံကို ရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
RF လက်ကိုင်- အကန့်အသတ်မရှိ ရိုက်ချက်များ
မတူညီသောဧရိယာများအတွက် ကုသမှုအကြံပြုချက်3ခု
သေးငယ်သော (21 မီလီမီတာ) : မျက်လုံးဝိုင်းခြင်းအတွက်
အလယ် (27 မီလီမီတာ) : မျက်နှာကုသမှုအတွက်
Big (36mm): ခန္ဓာကိုယ်ကုသမှုအတွက်
RF-lifting အရေပြားတင်းကြပ်ခြင်းသည် ရေဒီယိုလှိုင်းများကိုအခြေခံ၍ ခေတ်မီကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်မှုရှိပြီး၊
စက်ရပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ကုသမှုခံယူပြီးနောက် လူနာများသည် အရေပြားတင်းမာမှုကို ချက်ချင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။မှန်ကန်သော အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် ရလဒ်များသည် နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ကြာရှည်နိုင်သည်။
ရေစီးနှုန်းနည်းသော diode ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်းလေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက်?
ရေစီးနှုန်းနည်းသော ပြဿနာသည် အလှပြင်ဆိုင်နှင့် ဒိုင်အိုဒ်များအတွက် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက်ရောင်းသူ။ဒါပေမယ့် ရေစီးနှုန်းနည်းတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရှားပါးပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ရေစီးနှုန်း နိမ့်ကျတဲ့ ပြဿနာက ဘာကြောင့် ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါမယ်။
ရေစီးနှုန်းနိမ့်တဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရေစီးနှုန်းနည်းတာက ရေစီးနှုန်းနဲ့ ကွဲပြားတာကို ခွဲပြီး ပြောပြသင့်ပါတယ်။ရေစီးနှုန်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ပန့်များပေါ်တွင်သာမက ရေအာရုံခံကိရိယာ၊ အအေးခံကွန်ပရက်ဆာနှင့် လက်ကိုင်အတွင်းရှိ ရေလမ်းကြောင်းများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ရေအပြည့်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စနစ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
သင့်စက်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်ပြအချက်ပြသည့်အခါ ရေစီးနှုန်းနိမ့်သည်ဟု ရေးထားပါသလား။
သင့်လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက်ကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
1. အများစုမှာ ရေစီးနှုန်းနိမ့်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ လက်ကိုင်အတွင်းရှိ မိုက်ခရိုချန်နယ်ကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ပထမဦးစွာ သင်သည် လက်ကိုင်ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို ဖယ်ရှားပြီး အဆင်ပြေမှုရှိမရှိကို သိရှိရန် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သင့်သည်။
အဆင်မပြေသေးပါက လက်ကိုင်ကို ဖြုတ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့ လေစုပ်စက်ဖြင့် ဖုန်မှုန့်အတွင်းရှိ လက်ကိုင်ကို မှုတ်လိုက်ပါ။လေမှုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးထိုးကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
လက်ကိုင်မိုက်ခရိုချန်နယ်များအတွင်းမှ ဖုန်မှုန့်များနှင့် လေများကို မှုတ်ထုတ်ပြီးနောက်၊ ရေစီးဆင်းမှု ကောင်းမွန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။
2. ရေစီးနှုန်းနိမ့်ရခြင်း၏ ဒုတိယအကြောင်းရင်းမှာ ရေစုပ်စက်များ 100% အလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။သင်၏လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက်သည် အသေးစားပန့်များစွာ သို့မဟုတ် ပန့်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။100% ထိရောက်မှု ရှိမရှိ သိနိုင်ရန် လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း အိတ်ကိုဖွင့်ပါ၊ ပန့်များအားလုံး၏ လက်ရှိနှင့် ဗို့အားကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
3. တတိယတစ်ခုကတော့ ရေအာရုံခံကိရိယာ ပျက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေအာရုံခံကိရိယာကို ချွတ်ပြီး ပါးစပ်ဖြင့်မှုတ်ပါ။တီးမှုတ်ပြီး လှည့်ပတ်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ကြားနိုင်ရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ထို့နောက် ၎င်းကို ဆက်လက်အလုပ်လုပ်စေရန် ရေအာရုံခံကိရိယာအား ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်သည်။
4. ရေစီးနှုန်းနိမ့်ရခြင်း၏ နောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ ရေစစ်စစ်များနှင့် အိုင်းယွန်းစစ်ထုတ်စက်များမှ ဖြစ်နိုင်သည်။Filter များသည် မပြောင်းလဲဘဲ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒါကြောင့် ဖုန်မှုန့်တွေ ရှိနေပြီး Filter လုပ်ဖို့အတွက် မရှင်းလင်းပါဘူး။ထို့ကြောင့် ရေလမ်းကြောင်း ကြည်လင်စေရန် Filter အသစ်များကို ပြောင်းလဲသင့်ပါသည်။
ယခင်- စက်ရုံစျေးနှုန်း3in 1 ipl elos လေဆာ diode လေဆာ 808 nm triple wave diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစက် brother colour laser ani and alex q switched nd yag laser elos iplmultifunction beauty machine for salon spa
နောက်တစ်ခု: Diode လေဆာ အမွှေးအမျှင်များကို ဖယ်ရှားခြင်း Nd Yag Ipl Ipl လေဆာစက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလှပြင်ပစ္စည်း Diode လေဆာ OPT/IPL Nd Yag လေဆာစက်
STELLE Diode လေဆာ 808nm IPL SHR SSR OPT E-light
STELLE စက်ရုံစျေးနှုန်း လက်ကားအသစ် Diode လေဆာ ...
CE အသိအမှတ်ပြု3in 1 ဘက်စုံသုံး အလှပြင်စက်...
စက်ရုံစျေးနှုန်း လက်ကားအသစ် Diode လေဆာဆံပင် Re...
အရောင်းရဆုံး 808nm Diode လေဆာ IPL SHR SSR E-lig...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် diode လေဆာနှင့် ndyag လေဆာ2in ...